Ezi, Onye Ukwu ahụ, na withjọ dị na ọgụgụ isi Arctic | Martech Zone
Mgbe m ji nsọpụrụ si n'ụgbọ mmiri tọhapụ m na 1992, ọ bụ oge zuru oke. Agara m ọrụ maka Virginian-Pilot na Norfolk, Virginia - ụlọ ọrụ nke nakweere IT Innovation dịka akụkụ nke isi atụmatụ ya. Anyị arụnyere eriri ma wepu satịlaịtị na ntanetị, anyị na-ejikwa ihe nchịkwa na-arụ ọrụ nke ọma na PC na weghaara data nke nyeere anyị aka ịmezi mmezi anyị site na Intranet, na nne na nna ụlọ ọrụ, Landmark Communications, etinyeworị ego na inweta akwụkwọ akụkọ na ntanetị. Amaara m na Web bụ ihe na-agbanwe ndụ m.
Naanị afọ abụọ tupu mgbe ahụ, Onye isi ala Tim Berners-Lee wuru ngwaọrụ niile dị mkpa maka Web na-arụ ọrụ, gụnyere HyperText Nyefee Protocol (HTTP), Asụsụ Mkpokọta HyperText (HTML), ihe nchọgharị weebụ mbụ, nke mbụ Http software nkesa, ihe nkesa weebụ mbụ, na mbụ Web peeji nke kọwara ọrụ ahụ n'onwe ya. Azụmaahịa m na ọrụ m malitere n'ụzọ nkịtị n'ihi ihe ọhụrụ ya, achọkwara m ịhụ ya ka ọ na-ekwu okwu n'ihu mmadụ.
Afọ 25 mgbe e mesịrị na Mgbanwe IT
Akara Schaefer kpọ m ka m sonyere ya Nkọwapụta - inggwa Uche Na-egbuke egbuke na Tech, Podcast nke na-enye nghọta dị ukwuu banyere ndị isi na-akpata ụlọ ọrụ kachasị ọhụrụ n'ụwa. Ọ bụ ezie na amaara m Dell dị ka ụlọ ọrụ na-ere ndị desktọọpụ na laptọọpụ ndị ahịa na sava na azụmaahịa - Enwetụbeghị m nghọta banyere usoro teknụzụ nke Dell Technologies ruo mgbe ohere a. Ọ bụ njem na-adọrọ adọrọ - ma site na iso Mark rụ ọrụ onye m nwere nkwanye ùgwù dị ukwuu maka - yana ị nweta ọdịnihu mgbe m gbara onye ndu Dell ajụjụ ọnụ.
More na nke ahụ mechara!
Dị ka akụkụ nke usoro ihe omume ahụ, a kpọrọ anyị ka anyị bịa Dell EMC Worldwa na Las Vegas (ebe m na-ede ihe a na tebụl ime ụlọ m). Anyị chọpụtara, n'oge na-adịghị anya, na Berners-Lee ga-ekwu okwu Amamịghe echiche. "Giddy" bụ naanị oge kwesịrị ekwesị iji kọwaa mkpali m. Echere m na Mark ọbụna gwara m ka m wetuo obi n'otu oge. 🙂 Jide n'aka na ị ga-achọpụta Echiche Mark n'okwu a!
Sir Tim Berners-Lee na ọgụgụ isi
Akara maka okwu ahụ gbara gburugburu ọkara ụzọ gburugburu Sands Expo ma enwere m ekele maka Mark na-ejide ebe na akara ka m mere ngwa ngwa ngwa ngwa ahụ site na ndekọ ọhụrụ anyị. Anyị nọdụrụ ala, Mark wee see foto m n'elu… woohoo! Minit ole na ole ka e mesịrị, Sir Tim bịara n’elu ikpo okwu wee bido mkparịta ụka ahụ. Ọ kesara ịhụnanya mbụ ya maka Isaac Asimov na Arther C. Clarke, ndị edemede abụọ nna m nwụrụ anwụ mere ka m mata mgbe m bụ nwata (yana Star Trek, n'ezie!). Na 16 afọ m agadi, ọ bụ ihe na-atọ ụtọ iche echiche banyere myirịta nke ndụ anyị - ọ bụ ezie na amaara m na agaghị m agbapụ ndị isi. Ee, dị ka a ga - asị na ọ bụ naanị ihe dị iche.
Berners-Lee mere ka onye ọ bụla mara na ọ bụghị ọkachamara AI, mana o nwere ụfọdụ echiche dịka uru na ụjọ dị n'ebe ahụ. Mgbanwe ndị ga-esite na AI bụ ihe a na-apụghị ịghọtapụta n'oge a, mana ọ nweghị onye na-arụ ụka banyere ohere ọ nwere ma ọ bụ uru na-enweghị ngwụcha nke ihe a kpọrọ mmadụ.
As DellEMC Na-aga n'ihu na teknụzụ nke ya, dịka ọmụmaatụ, ijikọta ọnụ na AI adịworị na mmiri - sistemụ nke na-etopụta nghazi, nchekwa, na netwọkụ nwere ọgụgụ isi dịka ụlọ ọrụ chọrọ ha. Mbelata nke njikọta oke, sistemụ ndị na-adịghị ahụkebe, na njehie mmadụ ga-enyere ọtụtụ ụlọ ọrụ aka iru igba egbe ọsọ, okwu a na-anụkarị ọtụtụ ugboro na ihe omume ahụ.
Berners-Lee kwurịtara ọganihu nke ọha na-erute nke ga-enyere aka belata mkpofu, nwekwuo arụmọrụ, yana mmụba nke ọha mmadụ na mmadụ.
Chee echiche banyere nke a site na ileba anya na ụlọ ọrụ, ịnwe sistemụ ego nwere ike ịkọ, kwado, ma ọ bụ tụgharịa dabere na ahụike gị. Ma obu usoro oru ndi mmadu nke meputara ihe nkwalite nke ndi mmadu choro. Ma ọ bụ usoro ọrụ ugbo nke na-eme ka ojiji nke pesticides ma ọ bụ mmiri dị ike na-enweghị ike gwa onye ọrụ ugbo. Ma ọ bụ ụlọ ọrụ teknụzụ nwere ike ịba ụba ma bulie akụrụngwa yana ọbụlagodi ahụmịhe onye ọrụ na-enweghị mkpa iji mepụta atụmatụ ngwaahịa, otu ndị na-elekwasị anya, ma ọ bụ nnwale.
Ma ọ bụ, n'ezie, ịzụ ahịa ọgụgụ isi nke na-ahazi asụsụ, onyinye, ndị na-ajụ ase, na ọwa iji hazie ma dọta atụmanya ahụ! Chaị!
Gịnị banyere Skynet na Singularity?
The singularity bu nkwuputa na ncheputa nke amamịghe ga-ebute ngwa ngwa ntoputa na teknụzụ, na-ebute mgbanwe mgbanwe na mmepeanya mmadụ.
N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, gịnị na-eme mgbe usoro dị iche iche mepụtara sistemụ karịrị ike anyị ịghọta ha? Nkọwa sayensị akọwawo nke a dị ka Terminator, ebe teknụzụ na-ekpebi ụmụ mmadụ enweghị isi ma na-ebibi anyị. Ọhụụ Berners-Lee abụghị ihe ike kama ọ ka na-ebute oke nchegbu. Otu n’ime ihe ndị o kwuru bụ na ndị rọbọt enweghị na ha agaghị enwe ikike. Ndi isi n’achụmnta ego na ndi ochichi aghaghi ihiwe njikota ihe ndi ozo kariri Iwu Atọ Isaac Asimov.
Ka anyị hapụ ngwa agha robotic nwere ọgụgụ isi nke mebiri iwu # 1. Nsogbu a, dị ka Berners-Lee si kọwaa bụ na ọ bụ ndị robots bụ ezigbo okwu - Amamịghe echiche bu. Ndị ụlọ ọrụ na- teknụzụ na ha niile ga-etinye n'ọrụ AI iji nyere aka n'akụkụ ọ bụla nke azụmaahịa ha. Mark na-ekerịta Pino Domino dị ka ihe atụ. Ha bụ ụlọ ọrụ Pizza na teknụzụ? Ma obu ha bu a ụlọ ọrụ teknụzụ wuru iji nye Pizza? Ọ bụ nke ikpeazụ taa.
Na nsogbu ahụ? Ndị ụlọ ọrụ do nwee ikike; ya mere, teknụzụ ha nwere ikike ekere uwa. Site na proxy, ọgụgụ isi nke ụlọ ọrụ ahụ mepụtara ga-enwe ikike. Nke ahụ bụ nnọọ ihe nkwekọrịta nke ekwesịrị ịtụle ka ọgụgụ isi na-eme ngwa ngwa na ewu ewu. Cheedị banyere ụlọ ọrụ buru ibu, dịka ọmụmaatụ, nke nwere ikpo okwu nke na-eji ọgụgụ isi eme ihe iji mepụta ihe ga-aba uru maka ndị na - ekenye ha - mana nke ahụ na - emebi mmadụ. Ọ bụghị ígwè ọrụ ụgbọ ala anyị kwesịrị ichegbu onwe anyị, ọ bụ ọgụgụ isi nke na-enweghị njikwa iji hụ na nchekwa na nchekwa anyị.
Berners-Lee na-eche singularity nwere ike ịbụ eziokwu n'ime afọ 50. O kwukwara hoo haa na ọ bụ nke ya kenche chere na AI ga-akarị ọgụgụ isi mmadụ. Anyị na-ebi n'oge dị ịtụnanya! Ekwetaghị m na Berners-Lee na-atụ ụjọ ma ọ bụ na-atụ ụjọ maka ọdịnihu a-ọ kwuru na ụlọ ọrụ, gọọmentị, na ndị na-akọ akụkọ sayensị na-ekwukarị iji kwurịta okwu ndị a karịa ma ọ bụrụ na anyị nwere olile anya iji hụ na ọdịnihu anyị bụ nchekwa.
Ngosipụta: Dell kwụrụ ụgwọ niile m mefuru iji gaa Dell EMC World ma bụrụ onye ahịa m maka Ihe na-enye ìhè pọdkastị. Jide n'aka na-akụ na inyocha anyị, anyị chọrọ n'ezie gị nzaghachi!
Tags: aindị ahịa-leeconvergenceDelldell emcdell emc ụwahyper-mgbanwelas vegasihe na-enye ìhèAkara Schaefertim berners-lee